Solar Panel Manufacturers, Solar Panel Kit Suppliers, Mono Solar Panel - Haitian
Anyị Real Inyefe Erute Beyond dizel & mmanụ ụgbọala Engine
Ningbo Haitian ogbara ohuru hiwere na 2001, bụ otu n'ime ndị na-eduga emeputa nke anyanwụ photo-voltaic na anyanwụ modul mmekọrita ngwaahịa usoro China. Haitian aku na R & D na mmepụta nke crystalline sịlịkọn anyanwụ mkpụrụ ndụ na modul. poli-sịlịkọn anyanwụ ogwe nke nwere a nso nke 5 ruo 300 W kwa panel, mono-crystalline anyanwụ ogwe na-na nso nke 160-190W / 260-280W kwa panel. Na anyị na ngwaahịa, na-abịa na OA, Mankeumman, TUV asambodo. E wezụga, anyị nwekwara ike chepụta na-enye ifufe-anyanwụ ngwakọ usoro ihe ngwọta maka gị ma ọ bụrụ mkpa na ụfọdụ pụrụ iche na saịtị ...
Solar PV System N'ihi Residential
Solar PV usoro na-agụnye dị iche iche mmiri na a ga-ahọrọ dị ka gị usoro ụdị, saịtị na ọnọdụ na ngwa. The isi mmiri n'ihi na anyanwụ PV usoro bụ anyanwụ ụgwọ njikwa, inverter, batrị akụ, inyeaka ike isi mmalite na ibu (ngwa).
Industrial na azụmahịa ike anyanwụ usoro
Industrial na azụmahịa ike anyanwụ usoro mejupụtara anyanwụ ogwe, a usoro njikwa na inverter. Solar panel ga-emepụta DC (Direct Ugbu A) ọkụ, na ihe a na ọkụ eletrik ga-agba ọsọ ezie na Ntụgharị na inverter na-emepụta AC (nwetụ Ugbu A) na ọkụ eletrik. Mgbe ahụ a na ike a na-agba ọsọ n'ime AC ike panel azụ mmekọ ụlọ ọrụ ike okporo. Ka on-okporo ike anyanwụ usoro arụ uru nke batrị-free na ala na-eri ...
ifufe anyanwụ ngwakọ usoro n'ihi na n'ụlọ
Dị ka ọtụtụ ndị ogbara ohuru ọkachamara, a obere "ngwakọ" electric usoro na-agwakọta ifufe na anyanwụ (photovoltaic) teknụzụ awade ọtụtụ uru n'elu ma otu system.In ukwuu nke ebe, ifufe gbapụrụ ọsọ ndị dị ala na okpomọkụ mgbe anyanwụ na-awa-egbuke egbuke ma fọdụrụ n'ezinụlọ. Ifufe dị ike na oyi mgbe obere ìhè anyanwụ dị. N'ihi na elu na-arụ ọrụ ugboro maka ifufe na
oru ngo gallery
Poland Plant 40KW PV usoro
China Shanghai Home PV usoro
Ireland ifufe anyanwụ ngwakọ azụmahịa usoro
Finland 15kw Wind Solar ngwakọ System
Bolivia ifufe anyanwụ ngwakọ azụmahịa usoro